10 သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကျော်ကြားဆုံးအထင်ကရနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကျော်ကြားဆုံးအထင်ကရနေရာများ
ရထားခရီးသွားခြင်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရုရှားခရီးသွားရုရှား, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:9မိနစ်များ
ဗိသုကာအတွက်အထင်ကြီး, သမိုင်း၌ငွေရတတ်သော, ထဲမှာ အလှဆုံးမြို့ကြီးများ ကမ္ဘာပေါ်မှာ, အဆိုပါ 10 သင့်ရဲ့ဖြစ်သင့်သည်ရထားလမ်းဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကျော်ကြားဆုံးမှတ်တိုင်များ ပုံးစာရင်း. ဥရောပကနေတရုတ်အထိ, ဘာလင်၏အကျော်ကြားဆုံးဂိတ်မှတဆင့်, နှင့် Forbidden City မှ, မင်းကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည့်အထင်ကရအဆောက်အအုံများတွင်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်ရှုခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့မှတ်တိုင်ကိုလက်လွတ်ဖို့အရမ်းခက်တယ်, 300 မီတာအမြင့်သံမျှော်စင်. သင် Le Marais တွင်လမ်းလျှောက်နေသလား, ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်, သို့မဟုတ်လက်တင်ရပ်ကွက်, ဒီပဲရစ်၏iconရာမသင်္ကေတသည်ခပ်သိမ်းသောအချိန်၌မြင်နိုင်လိမ့်မည်.
ဒါကြောင့်, သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပဲရစ်ခရီးသွားလျှင်, သငျသညျအရှိဆုံးကျိန်းသေ Eiffel ၏မြင်ကွင်းကိုနေ့အလင်းရောင်နှင့်ညအချိန်၌ Eiffel မျှော်စင်သွားရောက်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်. ထိုကွောငျ့, သင်၏လည်ပတ်မှုအတွက်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားသင့်ပြီးပါရီရှိ Eiffel Tower သို့သွားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်သိသင့်သည်, သို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဥရောပ၌.
Eiffel Tower သို့ရထားဖြင့်ဘယ်လိုသွားရမလဲ?
Eiffel Tower သို့သွားရန်အကောင်းဆုံးမှာရထားဖြင့်ဖြစ်သည်. အဆိုပါ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ပဲရစ်ရှိစနစ်သည်အလွန်ထိရောက်ပြီးအဆင်ပြေသည်. Arrondissements နှင့်အထင်ကရအဆောက်အအုံများကိုဖြတ်ပြီးခရီးသွားရတာအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်, နှင့် Eiffel မျှော်စင်၏မွို့၌ဗဟိုတည်နေရာကပြင်သစ်ရထားလမ်းနှင့်ကောင်းစွာချိတ်ဆက်သည်ကိုဆိုလိုသည်.
Champ de Mars / Tour Eiffel သည်အနီးဆုံးရထားဘူတာဖြစ်သည်, နှင့် Eiffel မျှော်စင်တရားမျှတသည်2ဘူတာရုံမှမိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်. သို့သျောလညျး, Trocadero ဘူတာရုံမှထွက်ခွာမျှော်စင်နှင့် Seine ပိုမိုမှော်အမြင်များကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်. သင်သည် RER လိုင်း C ကိုမိနစ်အနည်းငယ်တိုင်း Eiffel Tower သို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်, နှင့်ခရီးတစ်ခုတည်းအတွက်မက်ထရိုလက်မှတ်€ဖြစ်ပါတယ် 1.9.
2. မီးရထားဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်အကျော်ကြားဆုံးအထင်ကရနေရာများ: တရုတ်နိုင်ငံ၏မဟာတံတိုင်းကြီး
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလူလုပ်အထင်ကရနေရာ, တရုတ်ပြည်ကမဟာတံတိုင်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တယ် 2000 တည်ဆောက်ရန်နှစ်ပေါင်း. ပထမ ဦး ဆုံးနံရံဆောက်လုပ်ရေးကို ၇ ရာစုအစောပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သည်, နောက်ပိုင်းတွင်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအားကြီးကျယ်ခမ်းနားသောlandရာမအထင်ကရနေရာတစ်ခုအဖြစ်သို့တိုးမြှင့်စေရန်နှင့်နောက်ထပ်နံရံများကိုထပ်ဖြည့်ခဲ့သည်။.
တရုတ်ပြည်ကကြီးကျယ်ခမ်းနားကြီးကျယ်ခမ်းနားသည်, သငျသညျအများအပြားကနေအရမ်းလေးစားမိပါတယ် တရုတ်အနှံ့သောနေရာများ, နှင့်တက်ယူနိုင်ပါတယ် 175 အပြည့်အဝကဖြတ်ကူးဖို့ရက်ပေါင်း. သို့သျောလညျး, တရုတ်နိုင်ငံ၏မဟာတံတိုင်းကြီးကိုလေးစားရန်အကောင်းဆုံးနေရာမှာပေကျင်းဖြစ်သည်, ပေကျင်း၏ဆင်ခြေဖုံး, နှင့် Badaling ကဲ့သို့မြို့များ. ကောက်ချက်ချရန်, တရုတ်နိုင်ငံ၏အရွယ်အစား၏မဟာအမှတ်တရ, သမိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ်ပာယျ, နှင့် Out-of-ဤကမ္ဘာဒီဇိုင်းကတစ် ဦး ပါစေ 10 ရထားနှင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်အကျော်ကြားဆုံးမှတ်တိုင်များ.
Huoying Station သို့မြေအောက်ရထားဖြင့်သွားရမည်သို့မဟုတ် Airport Express လိုင်းဖြင့်သွားသင့်သည်. ထို့နောက် Huangtudian မီးရထားဘူတာမှ S2 ရထားကို Badaling မီးရထားဘူတာသို့ယူသွားပါ. မီးရထားဘူတာကနေမိနစ် ၂၀ လမ်းလျှောက်မှာ Great Wall ရဲ့ဝင်ပေါက်ကိုတွေ့လိမ့်မယ်.
3. မီးရထားဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်အကျော်ကြားဆုံးအထင်ကရနေရာများ: Sistine Chapel ဗာတီကန်စီးတီး
Michelangelo ၏လှပသောနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအံ့ visitors လောက်သော visitors ည့်သည်များဖြစ်သည်. အတွက် Sistine Chapel ဗာတီကန်စီးတီး သောကြာနေ့ညနေခင်းများနှင့်ပြည့်နှက်မှုနည်းသောအချိန်တွင်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောအနုပညာလက်ရာများကိုဗာတီကန်ပြတိုက်များမှတဆင့်ရရှိနိုင်သည်, နှင့်သင်ကဝင်ရန်အချိန်စာအုပ်ဆိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ.
Sistine Chapel ကိုဆဌမမြောက်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်, အဘယ်သူသည် 15 ရာစုအတွင်းကတည်ဆောက်ခဲ့သည်. ထို့ကြောင့်, Sistine Chapel ရှိမျက်နှာကျက်ကိုအလှဆင်ထားသောနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများသည်ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်းမှပုံပြင်များကိုဖော်ပြသည်. ထူးခြားတဲ့ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်အရောင်များကို, နံရံဆေးရေးပန်းချီကားများကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားသည်, မင်းတို့မြင်ကွင်းတွေကိုကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်တစ်ရက်လုံးလုံးသုံးနိုင်တယ်.
ရောမမြို့မှ Sistine Chapel သို့မည်သို့သွားရမည်နည်း?
Sistine Chaple သည်ဗာတီကန်စီးတီးတွင်ရှိသည်, ရောမအပြင်ဘက်မှာ. ထိုကွောငျ့, သင်မီလန်မှလာရောက်လည်ပတ်လျှင်, Florence သို့မဟုတ်ဥရောပရှိအခြား ဦး တည်ရာ, သင်ပထမ ဦး ဆုံးယူသင့်သည် မြန်နှုန်းမြင့်ရထား ရောမမြို့မှ. ထိုအခါ, Roma Tiburtina မှ Roma St သို့ရထားဖြင့်သွားပါ. Pietro ဘူတာရုံ, ထိုသို့ဖြစ်ပါသည် 14 အဆိုပါ Sistine Chapel မှမိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်.
ဘူဒါပက်သို့မဟုတ်ဗီယင်နာမှ, ဥရောပရှိမည်သည့်နေရာမှမဆို Charles Bridge သို့ခရီးသွားခြင်းသည်မည်သည့်အခါကမျှပိုမိုလွယ်ကူခဲ့သည်. ဒါအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး, ပရာ့ဂ်ရှိချားလ်စ်တံတားသည်ရထားဖြင့်လည်ပတ်ရန်ကျော်ကြားသောအထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသုံးသပ်ခြင်း. Gothic ကျောက်တံတား, ရုပ်, Mala Strana နှင့်မြို့ဟောင်းအကြားဗဟိုတည်နေရာ, ၎င်း၏ဘုန်းအသရေများအတွက်အကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်ကိုသာဖြစ်ကြသည်.
ထို့အပွငျ, Charles Bridge သည်ဥရောပရှိအလှဆုံးနှင့်ရှေးအကျဆုံးတံတားများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, အကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေနေသည့်ရာနှင့်ချီသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် Instagram pic တံတားပေါ်အစက်အပြောက်. ဟုတ်ကဲ့, နေ့နှင့်နှစ်၏မည်သည့်အချိန်တွင်မ, ကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံးနေရာတစ်ခုကိုလေးစားဖို့အတွက်ပရာ့ဂ်မှာရှိတဲ့ visitors ည့်သည်ပေါင်းများစွာကိုသင်ပူးပေါင်းပါဝင်လိမ့်မယ်.
မီးရထားခရီးသွားလာ ဥရောပ၌အလွန်အဆင်ပြေမြန်ဆန်သည်, အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ Charles Bridge သို့သွားနိုင်သည်. အဓိကရထားဘူတာမှ (ဒေသခံဘာသာစကားမှာ: ဗဟိုဘူတာ), အကြောင်းပါ 13 ချားလ်စ်တံတားမှမက်ထရိုအားဖြင့်မိနစ်. သင်တို့သည်လည်းထိုအရပ်၌ခြေလျင်ရနိုင်ဘူး, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 25 ရထားဘူတာမှ Charles Bridge သို့မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ရမည်, သင်မူကား၊, ဘူဒါပက်, သို့မဟုတ် Zermatt.
5. မီးရထားဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်အကျော်ကြားဆုံးအထင်ကရနေရာများ: စိန့်. Basil ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမော်စကို
အများဆုံးထဲကတစ်ခုပါ အံ့မခန်းရင်ပြင်များ ကမ္ဘာပေါ်မှာ, မော်စကိုရှိအနီရောင်ရင်ပြင်တွင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံးဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးဖြစ်သည်. စိန့်. Basil ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအံ့ is ဘွယ်ဖြစ်၏, နှင့်6ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, လှပပြီးအနုပညာဖြင့်ဂျီ ometric မေတြီပုံစံများဖြင့်ခြယ်သထားသည်. ခမ်းနားကြီးကျယ်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်နှင့်အတွင်းပိုင်းများတွင်လှပသည်, ပန်းချီကားများနှင့်အတူတန်ဆာဆင်တိုင်း Chapel အတူ.
စိန့်. Basil's Cathedral သည် Moscow ၏ထိပ်တန်းသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပြီးကြောက်စရာကောင်းသော Ivan အားအနိုင်ယူခြင်းအတွက်အောင်ပွဲခံသင်္ကေတအဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်, Kazan ၏ Khan က. ထို့ကြောင့်, မှစ. 1561 ၎င်းသည်နှစ်စဉ်သန်းပေါင်းများစွာသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်သည် 1 ရုရှားနိုင်ငံ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံးအထင်ကရနေရာများဖြစ်သည်.
St ဘယ်လိုသွားရမလဲ. Basil ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း?
စိန့် Basil ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း Red Square ၌တည်ရှိ၏, Leningradsky ဘူတာကနေ Okhotny Ryad ကိုသွားလို့ရတယ်. သငျသညျရုရှားရဲ့အကောင်းဆုံးကြည့်ချင်လျှင်, ထို့နောက်စိန့်ကနေမြန်နှုန်းမြင့်ရထား. ပီတာစဘတ်သည်ခရီးသွားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်.
6. စိန့်ခုနှစ်တွင် Peterhof နန်းတော်. ပီတာစဘတ်
ရုရှားဗာဆိုင်းကိုပေတရုမဟာကသူ၏တိုင်းပြည်၏ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်. မင်းရဲ့ Peterhof နန်းတော်သို့ခရီး, သငျသညျအောက်ပိုင်းပန်းခြံသွားရောက်ပါလိမ့်မယ်, ဥယျာဉ်အထက်, ပင်လယ်လမ်းကြောင်း, နှင့်သေးငယ်တဲ့နန်းတော်နှစ်ခု – Monplaisir နှင့် Marli နန်းတော်. ၁၇၇၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ဗာဆိုင်းသို့လာရောက်လည်ပတ်။ ပြင်သစ်လက်ရာများကိုယနေ့ရုရှားနိုင်ငံ၏အထင်ရှားဆုံးအထင်ကရနေရာတစ်ခုအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်လာသည်။.
အဆိုပါ Tsar ရဲ့နန်းတော်စမ်းရေတွင်းများအတွက်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ပါတယ်, မြစ်ကြီးများ, သမ္မာကျမ်းစာရုပ်ပွားတော်များ, နှင့်ဥယျာဉ်များ. ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဂျာမန်များသည်ဤခမ်းနားထည်ဝါသောနန်းတော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအောင်မြင်ရန်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည် ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အအမွေအနှစ် site ကို.
Peterhof နန်းတော်သည်စိန့်သို့သွားရောက်ရန်အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ပီတာစဘတ်. သင်သည်ပီတာ့ဟော့မြို့သို့ Baltiskiy ဘူတာမှ Noviy Peterhof ဘူတာသို့သွားနိုင်သည်.
7. မီးရထားဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်အကျော်ကြားဆုံးအထင်ကရနေရာများ: Colosseum ရောမမြို့
Colosseum သည်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်, ထိုကွောငျ့, Colosseum ကို tour ည့်လမ်းညွှန်ဖြင့်လည်ပတ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, အဆိုပါ တစ်ခုလုံးကိုကြွယ်ဝသောသမိုင်း ဒီကြီးစွာသောဆောက်လုပ်ရေး၏သင်တို့အဘို့အဆုံးရှုံးလိမ့်မည်. Flavian perကရာဇ်တွေကဒီလက်ရာကိုပွဲကြည့်စင်အဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်, လူအုပ်ကိုမိုးနှင့်လေမှကာကွယ်ရန်စိတ်ကူးနှင့်အတူ, စိတ်ထဲမှာ.
ယနေ့သင်သည် Colosseum အဆင့်အားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်, သို့မဟုတ်အနီးအနားရှိစားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေးဆိုင်များမှလည်းယင်းကိုသဘောကျသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, အစဉ်အဆက်ကိုတည်ဆောက်အကြီးမားဆုံး colosseum, တစ် ဦး အဖြစ်ယနေ့အသုံးပြုသည် တိုက်ရိုက်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲနေရာ. ဒီမှာ, သငျသညျဂီတကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးအမည်များကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်, ထိုကဲ့သို့သောအဲလ်တန်ဂျွန်အဖြစ်.
အဆိုပါ Colosseum သို့ဘယ်လိုသွားရမလဲ?
Colosseum ကိုရောမရှိလေဆိပ်နှစ်ခုလုံးမှသင်ရောက်ရှိနိုင်သည်, ရထားနဲ့. အားလုံးထွက်ခွာရထားရှိပါတယ် 15 Tiburtina ဘူတာမှမိနစ်, ပြီးတော့ဒီအီတလီအိုင်ကွန်ကိုမက်ထရိုဖြင့်တိုက်ရိုက်. သိသာထင်ရှားတယ်, ကရောမမြို့၏သမိုင်းဝင်စင်တာကနေ Colosseum ရရန်အလွန်လွယ်ကူသည်.
8. မီးရထားဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်အကျော်ကြားဆုံးအထင်ကရနေရာများ: လန်ဒန်မြို့ရှိ Westminster နန်းတော်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏အကျော်ကြားဆုံးအထင်ကရနေရာမှာ Westminster Palace နှင့် Big Ben Tower ဖြစ်သည်. ပါလီမန်၏အိမ်များ. Victoria Tower နှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးမျှော်စင်, Big Ben က, အင်္ဂလန်အတွက်အကျော်ကြားဆုံးမှတ်တိုင်ဖွဲ့စည်းရန်.
သိမ်းစ်မြစ်ကိုအပေါ်စီးမှဖြတ်, အနီးအနားရှိ London Eye ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အတူ, Westminster နန်းတော်ပတ်လည် setting ကိုထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်. အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များသည်, တစ်နှစ်ပတ်လုံး London Eye သို့လည်ပတ်ပါ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Westminster ကိုဝင်ခွင့်ကစနေနေ့မှာပဲဖြစ်နိုင်တယ်, ဇူလိုင်လနှင့်သြဂုတ်လအတွင်း.
The Westminster နန်းတော်နှင့် Big Ben သို့ဘယ်လိုသွားရမလဲ?
စက်ဝိုင်းပြွန်လိုင်းကို Westminster သို့မဟုတ် Trafalgar ဘူတာသို့ယူဆောင်ပါ. သင်လန်ဒန်ဆင်ခြေဖုံးကနေရောက်ရှိလာလျှင်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုဗြိတိန်သို့မဟုတ်ဥရောပ၌တည်၏, ထို့နောက်အနောက်တောင်ပိုင်းမီးရထားသည်ခရီးသွားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်.
ပေကျင်း၏စိတ်နှလုံး၌, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးialကရာဇ်နန်းတော်တံခါးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်. Peterhof ထက်ကြီးသည်, အဆိုပါ Louvre, ကရင်မလင်, နှင့်ဗာတီကန်, အဆိုပါတားမြစ်ထားသောမြို့တော်နန်းတော်ရှိပါတယ် 980 စူးစမ်းဖို့နန်းတော်အဆောက်အ ဦး များ. ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားအထင်ကရနေရာများနှင့်မတူဘဲ, ဒီတစ်ခုအားလုံးသစ်သားလုပ်ဖြစ်ပါတယ်. နှင့် 25 တရုတ်emကရာဇ်မင်းများသည်နန်းတော်၌ယခင်ကနေထိုင်ခဲ့သည်, Forbidden City သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးပြတိုက်ဖြစ်သည်.
ဒီထူးခြားတဲ့မှတ်တိုင်ကဒီနေ့ခေတ်မှာတောင်မှသူ့ရဲ့နာမည်ကိုမှန်ကန်စွာရရှိခဲ့တယ်. ဤအချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည် 40% နန်းတော်၏ still ည့်သည်များမှတားမြစ်ထားသည်. သို့သျောလညျး, Jingshan ပန်းခြံရှိတောင်ထိပ်တစ်ခုမှရှုပ်ထွေးသောတစ်ခုလုံးကိုသင်မြင်နိုင်သည်. အဆိုပါတားမြစ်ထားသောစီးတီးတစ် ဦး မဖွစျစခွေငျးငှါ ဥရောပ၌အရောင်အသွေးစုံ။ လှပသောနန်းတော်များ, ဒါပေမယ့်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်.
ရှန်ဟိုင်းကပေကျင်းကိုရောက်နေပြီ5ရထားနာရီ, ဒါပေမယ့်ပေကျင်းမှာ, သင်မက်ထရိုကိုတားမြစ်ထားသောစီးတီးသို့သွားနိုင်သည်.
10. မီးရထားဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်အကျော်ကြားဆုံးအထင်ကရနေရာများ: Brandenburg ဂိတ်ဘာလင်
Brandenburg ဂိတ်သည်ဘာလင်၏အရေးကြီးဆုံးမှတ်တိုင်ဖြစ်သည်, ကသံကုလားကာ၏သင်္ကေတဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်ကဘာလင်ခွဲဝေအဖြစ်. တံခါးကိုအစက Prussian ဘုရင်ဖရက်ဒရစ်ဝီလျံ ၂ ကတည်ဆောက်ခဲ့သည်, 18 ရာစု၌တည်၏. ထို့ကြောင့်, ဒီအိုင်ကွန်နောက်ခံသမိုင်းအကြောင်းလေ့လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်, အတိုချုပ်နှင့်အခြားခရီးသွားများအတွက်တွေ့ဆုံစဉ်, တစ် ဦး ပဲ့ထိန်းလမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်အားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်.
နေ့လည်နှင့်တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ, Pariser Platz သည်ဒေသခံအနုပညာရှင်များနှင့်ဂီတသမားများအတွက်စင်မြင့်ဖြစ်လာသည်. ဒေသခံများသည်ဂိတ်တံခါးမှစက်ဘီးစီး။ ထိုင်နေသည်ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်, chatting, တံခါးမှကြည့်ရှုရန်နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်ကိုစောင့်ဆိုင်း.
ငါ Brandenburg တံခါးသို့ဘယ်လိုသွားရမလဲ?
Brandenburg ဂိတ်သို့သွားရန်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းမှာ S-Bahn လိုင်းများဖြစ်သည်, မြေအောက်ရထားစနစ်. Brandenburger Tor station သို့သွားသောမည်သည့်လမ်းကြောင်းကိုမဆိုယူပါ.
နိဂုံးချုပ်ရန်, တည်နေရာ, သမိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ်ပာယျ, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, နှင့်ဤအထင်ကရများစွာ၏ပမာဏသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသန်းချီသော ists ည့်သည်များကိုဆွဲဆောင်သည်. သငျသညျတိုင်းတစ်ခုတည်းမှတ်တိုင်ရှေ့မှာရပ်အဖြစ်, ဥရောပမှာ, ရုရှားနိုင်ငံ, သို့မဟုတ်တရုတ်, site တစ်ခုစီ၏လှပမှုနှင့်ဖန်တီးမှုကိုသင်အံ့အားသင့်သွားသည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ငါတို့သည်သင်တို့ဤအရာတစျခုစီစဉ်ကူညီရန်ဝမ်းမြောက်ပါလိမ့်မည် 10 ရထားလမ်းဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးအထင်ကရနေရာများ.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်အား“ ရထားဖြင့်အလွယ်တကူလည်ပတ်ရန်ကျော်ကြားထင်ရှားသောအမှတ်အသား ၁၀ ခု” ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ထည့်သွင်းလိုပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fmost-famous-landmarks-visit-rail%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / fr ဖို့ / က de ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများ.
နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်များ အထင်ကရနေရာများ နာမည်ကျော်ကြားသောအထင်ကရရုပ်ရှင်များဥရောပ ရထားခရီးသွား ခရီးသွား
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား